Olee otú Play AVI on iPhone 5s enweghị ihe ọ bụla Nsogbu
> Resource> Video> Olee otú iji Play AVI on iPhone 5s
iPhone 5s naanị akwado a obere akụkụ nke AVI faịlụ. Kpọmkwem na-ekwu okwu, ọ dị nnọọ arụ AVI faịlụ na Motion JPEG dị ka video codec. Otú ọ dị, Motion JPEG video codec e ochie. Ndị ọzọ okwu, ọrụ ike egwu AVI on iPhone 5s na ọtụtụ ufodu. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ zụtara iPhone 5s, ọ bụ na ọ dị mkpa ka ị mara ihe otú e si akpọ gị AVI video collection na ngwaọrụ were were. Dabara nke ọma, isiokwu a ga-edozi nsogbu a, otú i nwere ike ime ka ọtụtụ nke ngwaọrụ.
Ihe ngwọta bụ iji tọghata AVI ka iPhone 5s n'ụzọ zuru ezu na-akwado formats. Ebe a, ị na-adịghị mkpa ịmata ihe Ọkpụkpọ na video codec bụ ihe kasị mma maka iPhone 5s. Ọ bụ kwa mgbagwoju anya. Ihe ga-aghọ nnọọ mfe dị ka ogologo oge ị na-eji oké video converting ngwá ọrụ, nke-enye gị ohere kpọmkwem tọghata AVI ka iPhone 5s maka ire ụtọ playback. Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac) bụ ndị dị otú ahụ a smart AVI ka iPhone 5s Ntụgharị. Ọ nwere ikike iji tọghata otu ma ọ bụ ọtụtụ AVI faịlụ ka ngwaọrụ na oké video àgwà na ibu ngwa-ngwa akakabarede ọsọ.
1 Import AVI a AVI video ka iPhone 5s video Ntụgharị
Ị ga-aba "tọghata" interface mgbe ị na-agba ọsọ ngwa a. Mgbe ahụ, ị ga-ahụ a bọtịnụ na n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke interface. Dị nnọọ pịa ya mbubata AVI videos ị chọrọ site na kọmputa gị. Ugbu a, ị pụrụ ịhụ niile kwukwara AVI faịlụ na a ngwa, dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru.
2 Họrọ iPhone 5s dị ka mmepụta format
A na ngwa nwere ihe optimzed presetting maka iPhone 5s. Ị dị nnọọ mkpa ịhọrọ ya dị ka mmepụta format, na mmepụta faịlụ ga-Ofụri Esịt dakọtara na ngwaọrụ.
Dị nnọọ aga n'akụkụ aka nri nke interface, na pịa format image n'ebe ahụ. Nke a ngwa si mmepụta format ndepụta ga-gbapụta ozugbo. Ọzọ, gaa na Ngwaọrụ> Apple> iPhone 5s.
3 Play AVI on iPhone 5s
Tọghata AVI ka iPhone 5s n'ụzọ zuru ezu na-akwado formats site ọkụkụ "tọghata" button na ala-nri akuku nke a usoro isi interface. Ndị fọdụrụ ihe ga-okokụre akpaghị aka site na nke a smart video Ntụgharị. A nkeji ole na ole mgbe e mesịrị, ị nwere ike pịa "Open nchekwa" nhọrọ ndị a converted faịlụ, na mgbe ahụ mmekọrịta ha ka ha iPhone 5s site iTunes.
Ugbu a, ị dị nnọọ-enwe ndị a magburu onwe AVI media ọdịnaya na jụụ iPhone 5s n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla.
Otú iji melite Ogo nke Video
Olee otú Download BBC Videos na Otu Click
AVI Splitter: Olee otú SPLIT / Cut / Kpaa AVI Files Mfe
Olee otú iji tọghata na Ọkụ ebudatara Movies ka DVD